29 marsa, andro iray ahatsiarovana ;
An’ireo Malagasy maro nahatsiaro tena.
Niady mba ahazo ny fahaleovantena ;
Nijaly, namoy ny ainy, ary fadiranovana.
29 marsa, namoretana an’ireo Malagasy ;
Nanerena azy tsy haneho ny ao am-pony.
Mbola izay ihany izao, ka be ny lonilony.
Ka aleo mangina, sao mahazo vody basy.
29 marsa, tokony ahatsiarovan-tena ;
Ka tsy tokony iadiana sy ifandroritana.
Fa hiraisana hina sy hanoritsoritana,
Izay hatao hampandrosoana ity Firenena.
29 marsa, andro iray manana tantara ;
Tsy fanadino, na anio na mandrakizay.
Ahatsiarovana ny mahery fo hatrizay ;
Maro izy ireo, ary be koa no azo ambara.
29 marsa, eny, hijanona ho tantara ihany.
Mety tsy hotadidy, na hotsaroana aza ;
Na lasa fitaovana ho an’ireo izay te-halaza.
Izay no mahalasa saina ary koa ny vinany.
29 marsa, hanombohana ny firaisankina ;
Hampitsaharana koa ny adilahy politika.
Ka hibahana ny ara-tsosialy sy ekonomika.
Ary izay rehetra hatao manaraka ny vina.
29 marsa, hiandohan’ny tena fahaleovantena.
Tsy hiankin-doha intsony amin’ny mpanjanaka.
Ka hiaina finaritra miaraka amin’ireo taranaka.
Ho tapitra tsy hisy intsony koa ny fitiavan-tena.
Sokajy : embona, Fahatsiarovana, Fiaraha-monina, Kolontsaina, Tanindrazana, Tsingerin-taona